PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - URAMAPHOSA UDELE IMVULA EBINA ETHEKWINI
URAMAPHOSA UDELE IMVULA EBINA ETHEKWINI
Ilanga langeSonto - 2018-09-09 - Izindaba - zowakha@ilanganews.co.za ZOWAKHA MBATHA
UZAMCOLO wayizolo ekuseni ethekwini kawumvimbanga umengameli wezwe, umnu Cyril Ramaphosa ukuqhubeka nohlelo lwakhe lohambo lwasemalokishini asenyakatho yetheku, Kwamashu nasenanda.
Lolu hlelo lungaphansi komkhankaso wakhe wokhetho lwangonyaka ozayo owaziwa ngethuma Mina Campaign. Ngokohlelo kusukwe eprincess Magogo Stadium ekuseni umengameli ehambisana nazakhamizi zakwamashu baze baphelele enxa-nxatheleni yezitolo, ibridge City, enanda.
Kushaye ihora lesikhombisa ekuseni sekusabalele ama- video beshaya umgwaqo, umengameli exoxa nezakhamizi, ezipha indlebe kwezikhala ngakho okuyinto azakhela ngayo ugazi. Imvula ebilokhu iyishaye njalo iphoqe ukuba abebe- zimisele ngokuba yingxenye yalolu hambo bazilungiselele ngezambulela nokunye ukuzivikela emvuleni.
Phakathi kwabaholi BE-ANC Kwazulu-natal ababonakale kulolu hambo ngumnu Sihle Zikalala ongusihlalo, isekela lakhe umnu Michael Mabuyakhulu nemeya yeTheku unkk Zandile Gumede.
Ngokohlelo lophiko lwentsha lweAfrican National Congress (ANCYL) Kwazulu-natal, ubezobe esedlulela emax’s Lifestyle emlazi emini kusikwe ikhekhe kugujwa iminyaka engu-74 kwasungulwa I-ANCYL.
Lolu phiko belumeme intsha ukuba ize izobungaza nalo nomengameli emini bebade, luholwa ngusihlalo walo ukwazi Mshengu nothanduxolo Sabela, ongunobhala osembangweni wokuhola lolu phiko kuzwelonke uma sekuyiwa okhethweni noreggie Nkabinde nondumiso Mokako.
UMENGAMELI wezwe, umnu Cyril Ramaphosa udele amakhaza nemvula evakashela emalokishini akhele itheku izolo.